Ny Valosoa, 20 Jolay 2017. Ireo vaovao. Ministry ny vola, Marc Ravalomanana, Ambatondrazaka, Coutiti, Sinoa, Fjkm… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← « Governemantan’ny ady », Dadan’i Zina.
« Nisy tsiky », Nitiah Nosy. →
Ny Valosoa, 20 Jolay 2017. Ireo vaovao. Ministry ny vola, Marc Ravalomanana, Ambatondrazaka, Coutiti, Sinoa, Fjkm…
Tsy matotra ny seraseran’ny fitondrana
Tsy matotra ny Serasera eo anivon’ny fitondrana iray manontolo, izay no azo amehezana azy satria ny Ministra Gervais Rakotoarimanana efa etsy amin’ny Hotel Carlton nilaza ny fametraham-pialany ; ny Filoham-pirenena mbola any am-pitokanana tetezana milaza fa tsy mahafantatra ny fametraham-pialan’itsy farany, ny mpanao gazety indray no lazainy fa milaza vaovao tsy marina. Mila fahamatorana sy fahaizana ny serasera eo anivon’ny Andrim-panjakana tsirairay satria lasa ny vahoaka no sahirana ; Nandeha be mantsy ny resaka fa hiala ny Ministra Gervais Rakotoarimanana ; afaka fotoana tsy ela indray dia nolazaina fa hiala ity Minitsra ity ; ny vaovao anefa efa naparitaka .
Vokany dia lasa tsy mpanao gezety tena mampihatra ny tena fahaizany ireo mpanao gazety mpandambolambo ny fitondrana ireo fa lasa mpamono afo izany hoe lasa Pompier fotsiny.
Fialan’ny minisitry ny vola
Ampidirina ny filoha Marc Ravalomanana koa
Tsy mba manaiky diso mihitsy ny mpitondra HVM rehefa misy zavatra miseho eto amin’ny firenena fa tsy maintsy izy ireo ihany no manana ny marina . Tompon’andraikitra lehibe, minisitry ny fitantanam-bola sy ny tetibola Rakotoarimanana Gervais no mametra-pialàna, fa tahaka ny tsy misy dikany amin’ny mpitondra izany , tonga dia soloina andro iray taorian’ny fametraham-pialàna, toy ny efa nomanina. Hita ihany anefa ny fomba fiasan’ity fitondràna ity fa 3 volana vao mahavita manendry Praiminisitra . Sady ny mampihomehy dia nilaza ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa tsy mametram-pialàna izany ny minisitry ny vola fa ianareo mpanao gazety no mamoaka vaovao tsy marina .
Ny minisitry ny vola anefa nanambara fa efa ny zoma izy no nametraka ny taratasy fialàny , ka raha izany no zohina ahoana no iray andro monja dia efa nahita minisitra hisolo toerana ny nametra-pialàna ny filoha Hery Rajaonarimampianina nefa milaza fa tsy mahalala n’inon’inona ? Manan-kambo ny dikan’izany ka tsy miraharaha na miala aza ny sasany, vao mainka midedaka ny gazety mpomba ny fitondràna fa hiroso amin’ny fampandrosoana ny firenena amin’izay i Madagasikara rehefa miala Gervais Rakotoarimanana . Tsy vitan’izany , ampiasaina ireo mersenera amin’ny resaka serasera mpamakafaka politika efa fantatry ny rehetra ihany ny mikasika azy ireo hanasa atidoha ny vahoaka Malagasy .
Asaina manaratsy ny minisitry ny vola teo aloha izy ireo amin’ny fanambaràna fa nanome vahana ny filoha Marc Ravalomanana izay mbola ananan’ny fanjakàna vola be. Mazava kosa aloha ny resaka e! ny filoha Hery Rajaonarimampianina minisitry ny vola tamin’ny tetezamita voasazin’ny vondrona Afrikana mahafantatra ny halatra be vava nataon’ny mpitondra tetezamita tsy ara-dalàna naka sy nivarotra ny vary , menaka , lafarinina fananan’ny TIKO tany Toamasina , aiza avokoa ny vola be azo tamin’ireny ? Ny olona nangalarana sy norobain’ny mpitondra fanjakàna tamin’izany indray ve no lazaina fa ananan’ny fanjakàna trosa be ? Ny tondrozotra nitondràna ny firenena tato aoriana koa mazava be fa honerana avokoa ny fananan’ny filoha Marc Ravalomanana norobaina tamin’ny 2009 .
Ka aiza ny minisitra manao ny asany araka ny tokony ho izy no henjehina fa matoa izy miala amin’io toeram-boninahitra harovanareo sy hamarotanareo fanahy io dia misy antony ao, fa mba mahaiza maka lesona. Farany , aza ny filoha Marc Ravalomanana izay lazainareo fa mangidy hoditra amin’ny vahoaka sy lazainareo fa naloam-bahoaka hatrany no lazaina fa ao ambadik’izay rehetra mihetsika eto , lazaina fa tsy tian’ny olona nefa mampangovitra .
Avelao hirotsaka avokoa izay te hirotsaka fa aza sakanana
Misy ny fanehoan-kevitra politika avy any Ambatondrazaka momba ny fifidianana filohampirenena ho avy. Tsy tokony hisy intsony ny fisakatsakanana fa aleo mihitsy izahay vahoaka no hisafidy ny olona tianay hitondra ny tany sy ny firenena. Hitovizan’ny olona rehetra io manoloana ny fifidianana izay ho Filoham-pirenena amin’io taona ho avy io. Raha milaza ho mamim-bahoaka ireo antoko na ny mpitondra na ny mpanohitra dia tokony hirotsaka hisedra izany hoy ny ankamaroan’ny olona nanaovana fanadihadiana. Tsy ilaina intsony ny “ni…ni” mba ialana amin’ny fahadisoan-dalana matetika hoy kosa ireo olona izay miaina ao anatin’ny sehatry ny politika.
Ny tena olana hoy ny ankamaroan’ny olona dia ny tahotr’ireo izay nanongam-panjakana ny firotsahan’ny Filoha Marc Ravalomanana izay hita ho tena mbola mamim-bahoaka hany ka manao tsindry etsy sy eroa ho entina manelingelina ity olom-bahoaka ity. Tsy mbola nisy Filoham-pirenena nahasahy namakivaky ny tanànan’ Ambatondrazaka hatramin’izay raha tsy i Dada hoy ny ankamaroan’ny olona. Izy ihany koa no Filoha nirotsaka teny an-tsaha nitafa tamin’ireo mpamboly sy mpiompy ka nahatonga ny fivoaran’ny fambolena sy ny fiompiana taty Alaotra izay nahafahan’izy ireny nividy “Kubota” sy moto nentina niasa. Miandry azy avokoa ny rehetra amin’izao fotoana izao ary tsy misy matahotra fifaninanana raha toa ka atao amim-pahamarinana izany.
Aleo halalaka ny vahoaka hifidy araka izany dia ho hita eo izay hametrahany ny fitokisany hoy ireo fanehoan-kevitra.
Miaro an-jambany ny fitondrana koa
Tsy hitan’ity fitondràna ity mihintsy izay asiany ny tenany , ka asaina miteny avokoa izao olona rehetra izao hiaro ny fahefana eo ampelatanany . Iza no tsy nahafantatra ny tantaran’izany kolonely Coutiti izany teto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 1991 nampigadra azy voalohany rehefa nanao herisetra ity farany nandritra ny tolona nataon’ny HERIVELONA nitaky ny fialan’ny filoha Didier Ratsiraka ka nahatonga ny filoha Zafy Albert hitondra ny firenena . Nivoaka ny fonja i Coutiti rehefa niverina teo amin’ny fitondràna ny amiraly Ratsiraka . Nanao ny nataony indray ity kolonely ity rehefa nitolona ho fiarovana ny safidiny ny Malagasy ny taona 2002 nampiakarana ny filoha Marc Ravalomanana hitondra ny firenena . Toa anatin’izany nitondra ny mafy ny vahoaka tany Diego vokatry ny herisetra nataon’ity kolonely ity , nisy mihintsy no namoy ny ainy tamin’izany sy nitondra takaitra . Navokan’i Andry Rajoelina mpanongam-panjakàna indray izy ny taona 2009, ity farany ihany anefa no namerina amponja azy taty aoriana .
Nivahiny tao amin’ny onjampeo tsy miankina iray ny kolonely Coutiti omaly , fanaratsiana ranofotsiny ny filoha Marc Ravalomanana no nataon’ity farany tao anatin’izany , fa tsy misy hevitra mivaingana sy mafonja , ary ny tena manahirana dia lasa miteniteny foana tsy mahalala tantara , ka lasa nihomehezana fotsiny sisa no niafaràny. Izany no tena hoe fiarovana an-jambany ny fitondrana fotsiny no nataony. Taiza ny filoha Marc Ravalomanana no nanapaka ny AGOA? Tsy ny fanonganam-panjakàna nataonareo ve no nahatonga izany ? Izay sisa no fomba fiadin’ny HVM , hampitenenina avokoa taorian’ny 15 jolay izao olona tsy credible na tsy to teny amin’ny vahoaka rehetra izao : Lalatiana Ravololomanana, Voninahitsy , Coutiti , iza koa ny manaraka ?…
Mpitondra fanjakana : mamorovoro tena toy ny tadio
Tsy sinemà intsony no ataon’ny mpiantsehatra ara-pôlitika amin’ny fitantanana ny Firenena amin’izao Repoblika IV izao fa sangodim-panina izay tsy hifarana raha tsy amin’ny fidaraboan’ny mpandray anjara rehetra rehefa tsy zakan’ny atidoha intsony izay haterany. Ny tena loza dia tian’ny mpitondra handray anjara amin’izany sangodim-panina ataony izany koa ny mpiray firenena ka misy tokoa ny mirotsaka an-tsehatra tsy te-hahalala izay mety ho fiantraikan’ izany eo amin’ny ho aviny.
Maro an’isa amin’izany ireo manampahefana isan’ambaratonga ao amin’ny fitondrana ka mirotsaka amin’ny asa mamoafady sy mambotry firenena ary manampatra fahefana. Tany am-boalohany dia nisangodina samy irery ny filohan’ny Repoblika IV ka nihevitra fa ho voavahany tao anatin’ny indray mipimaso avokoa ireo olana rehetra nihàtra tamin’ny vahoaka nateraky ny tetezamita izay niarahany nitantana ka noheveriny fa ny fanilihana ireo niaradia taminy sy fampidirana olon-kafa noheveriny naharaka azy amin’izany no nosintoniny. Tsapa anefa fa voahilika tsikelikely ireo sady nitsirepirepy no tsy nahita izay làlan-kombana intsony. Ireo manodidina akaiky kosa, nahita fa tena efa fanina tanteraka sy nalemy ny mpitarika dia nanararaotra ny toe-draharaha ka nody fanina fotsiny ary nandrombaka izay azony norombahana rehetra. Nitazana sady niezaka namingana kosa tetsy an-kilany ireo nahita fa efa tsy ho tafavoaka tao anatin’ilay sarika intsony ireo tafiditra tao.
Ny miaramila sy zandary ary polisy dia tsy nanan-katao afa tsy ny niaro ireo mpitondra tafara-dàlana ka nisambotra sy nanao ramatahora ireo olom-pirenena tsara sitrapo ka nampitandrina sy nanolo-kevitra nivoahana tamin’ny fibolisarana. Nivembena eo am-pijerena ny ataon’ny mpitondra azy ny vahoaka ka ny sasany, noho ny fahantrana sy tsy fanana dia lasa mandroba sy mandatsaka ny ain’ny mpiarabelona aminy mba hahazoana izay hakepoka androany fotsiny. Variana mihodinkodina anefa ny manampahefana ka tsy afaka mikaroka hevitra sy paikady mahomby hamerenana ny fahalemana manerana ny Firenena. Mety tsy ho ampy arak’isa angamba ny foloalindahy kanefa kosa toa mitangorona an-tanàn-dehibe fotsiny izy ireo. Nisy vata-miaramila arivo anefa afaka niambina tao Mahamasina ny 26 Jona 2017 lasa teo. Raha zato anefa no halefa hampandry tany any amin’ireo faritra mafanafana dia mety hilamina ihany ny tanàna.
Ny zava-doza anefa dia misy singa maromaro mamatsy fitaovam-piadiana ireo jiolahy kanefa dia tsy araky ny mpifehy azy ireny izany raha tsy efa aty aoriana ela. Angamba noho ny fiheverana fa ireo mihodinkodina fotsiny eto an-drenivohitra toa mahazo tsipitsipy kely foana isaky ny misy hetsika kanefa izy ireo kosa dia tsy manan-kantenaina ankoatr’izay zony isam-bolana. Ny vahoaka tsy mandady harona kosa dia atao fitaovana ihany ka hisarangotan’ny mpitondra amin’ny fampanantenana volana aman-kitana. Farany teo tokoa dia nampanantena indray ny filohan’ny Repoblika fa hazava amin’izay Madagasikara iray manontolo satria hahazo famatsian-jiro avokoa ny tanàna rehetra. Tsy ho azoazo fotsiny amin’izao anefa izany satria tsy afaka hampiditra herinaratra ao an-trano ny olona raha tsy mahaloa ny saran’izany. Tsy azo antoka anefa fa manam-bola entina hanatanterahana izany ho an’ny tafo amina tapitrisany izao fitondrana izao. Tsy hamoaka vola avy any am-paosiny koa anefa ny filohan’ny Repoblika ka inoana fa tsy ho voasarika amin’izany sangodim-panina izany ny olompirenena mahay mandinika satria vao tsy ela izy no nilaza fa “ny valala eny an-danitra tsy azo asian-tsira”.
Na izany na tsy izany dia misy kosa ny mahatsapa ny tsy mampety ny fitantanana ny raharaharam-pirenena sy ny fitantanam-bolam-bahoaka ka nanaja tena tsy te hitsirepirepy miaraka amin’izao fitondrana izao intsony ka miala sy mampiseho fa famonoan-tena ary ho fahafaham-baraka eo imason’ny vahoaka sy ny vondrona iraisam-pirenena raha mbola miharitra ny sangodim-panina misy. Haingana dia haingana ny fanovana ny minisitry ny vola sy ny tetibola nametraka fialàna. Saro-panina ihany ny vehivavy kanefa mahari-pery koa ka ny ampitso no hamaritra ny fahamarinan’izany.
Mitaraina ireo mpanangombokatra fa lasan’ny Sinoa ny trondro
Lasan’ny Sinoa ambongadiny i Madagasikara raha izao no mitohy hoy ny feo heno eny rehetra eny . Efa lasan’ny sinoa ny fitrandrahana ireo harena ankibon’ny tany manerana ny faritra maro eto Madagasikara , izao any amin’ny hazandranomasina eto Madagasikara indray no ataony majifa . Mitaraina ireo mpanangona vokatra mandoa volam-panjakàna ara-dalàna any amin’ny faritr’i Mahajanga iny fa tsy mahazo hazan-dranomasina tsara intsony ireto farany fa miditra an-tsehatra manatona ireo lakana ny Sinoa , ka ataony majifa ny vokatra tsara fa izay sisa tsy laniny sisa no omena ireo mpandraharaha Malagasy efa nivelona tamin’izany nandritra ny taona maro . Tonga dia miantraika mivantana amin’ny mpivarotra hazandranomasina aty Antananarivo izany satria sady lasa miakatra be ny vidiny , ireo sisa tsy tian’ny Sinoa sisa no hamidy ho jifain’ny mpanjifa eto an-toerana . Ny hazandranomasina dia sakafo ilain’ny Malagasy satria mitondra hery ara- pahasalamana feno ho an’ny rehetra , ka ny hatahorana dia tsy afaka hanjifa trondro intsony ny Malagasy raha tsy mandray andraikitra haingana ny mpitondra fanjakàna .
Miangavy ny mpitondra fanjakàna ireo mpanangona hazandranomasina mba hijery akaiky izao toe-javatra izao fa tena potika tanteraka ny Malagasy raha izao no mitohy .
Nitokona ny mpitatitra teny amin’ny Fasan’ny Karana
Tsy laharam-pahamehana ho an’ny fitondràna HVM ny resaka tsy fandriampahalemana miseho lany eto Madagasikara . Rehefa misy voadona ireo vondron’olona lehibe eto amin’ny firenena hatahoran’ny fitondràna hanembatsembana azy dia maika ny filoha Hery Rajaonarimampianina na ny Praiminisitra manome baiko ny mpitandro filaminana handray andraikitra . Mijanona ho resaka ambony vavahady fotsiny anefa izany fa tsy misy fanatanterahana. Ankehitriny , miseho lany ny fandrobàna arahina famonoana olona ho faty , asan-dahalo , fanafihana taksibrosy izay vao niseho omaly ka nahatonga ny fiara mandeha any amin’ny faritany nanao fitokonana omaly .
Tsy misy fandraisan’andraikitra matotra aroson’ny fitondràna manoloana izany , nefa zaraina ohatra ny vatomamy ny manamboninahitra jeneraly eto amin’ny firenena . Ny fanakanana ireo mpifanandrina politika amin’ny mpitondra hanao fety fankalazàna ny nijoroany no amoahana miaramila tsy hita noanoa , na ireo antoko sy fikambanana manao hetsika fitakiana am-pilaminana .
Handray ny jobily volamen’ny FJKM Antsiranana
Handray ny jobily volamenan’ny fiangonana FJKM Antsiranana, ho tanterahana any Diégo tokoa ny 18 ka hatramin’ny 20 Aogositra ho avy izao ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy ny faha-200 taona nahatongavan’ny Misiona LMS (London Missionary Society) teto amintsika.
Araka ny fantatra, hanatrika izany fanokafana izany mazava ho azy ny filohan’ny FJKM eto Madagasikara Irako Andriamahazosoa Ammi sy ny filohan’ny komitin’ny jobily fankalazana, ny filoha Marc Ravalomanana. Efa miomankomana hihazo ny faritra avaratry ny Nosy arak’izany ny ankamaroan’ny mpino FJKM. Hisy ny fiara iombonana ho an’ireo tsy mandeha fiara manokana, ny fisoratana anarana amin’izany fiara iombonana izany dia atao ao amin’ny Foibe FJKM etsy Analakely hatramin’ny 31 jolay ho avy izao, tokony homena ny tompon’andraikitra ihany koa ny isan’ny handeha amin’izany lanonam-panokafana any Antsiranana izany ho an’ireo fiangonana isanisany. Ho vonto filazantsara tokoa ity Nosy ity noho izany, araka ny teny faneva amin’izao fankalazana izao.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Fjkm jobily, Gervais Rakotoarimanana, Kolonely Coutiti, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa 20 Jolay, Rajaonarimampianina. Ajoutez ce permalien à vos favoris.